35 36 ကျမ်းစာအုပ်များရ...
စာကြည့်တိုက်တွင် စာအုပ်များနှင့် မှတ်စုမှတ်ရာများတင်ထားနိုင်ပါသည်။ ကျောင်းသားများနှင့် အခြားဗဟုသုတရှာဖွေလေ့လာနေကြသည့် ကျောင်းသား/သူများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများနှင့် လမ်းညွှန်များလည်း ပြသထားနိုင်ပါသည်။ အခက်အခဲရှိပါက မော်နီတာအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
14 15 ကျမ်းစာအုပ်များရ...
သတင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာစသည်များကို News & Info တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သတင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာစသည်များကို News & Info တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သီတဂူကျောင်းသားများနှင့် မန်ဘာများအနေဖြင့် HTML ရေးသားနည်းများ၊ CSS ရေးသားနည်းများ တတ်သိနားလည်ထားပါက မိမိ၏ Profile ပေါ်တွင် အများဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် တင်ထားနိုင်ပါသည်။
55Profile တွင် Use...
အထွေထွေကဏ္ဍတွင် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများရရှိစေမှု ဗဟုသုစာပေများစသည်နှင့် ကျောင်းသားများအတွက် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ ရရှိစေနိုင်သော Links များ ဖော်ပြပေးထားခြင်းဖြင့် ပညာဒါနဖြစ်စေပါသည်။ သီတဂူလပတ် စာမေးပွဲအတွက် မှတ်စုများကို General(အထွေထွေ) ကဏ္ဍမှာ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
12 12 အသောကမင်းကြီးးမတ...
Fri Sep 12, 2014 5:15 am
22 22 မဟာယာန၀ိနည်းနှင်...
21 21 မဟာယာန၀ိနည်းနှင်...
22၀သုဗန္ဓု ၏ ဘ၀ အတ္တ...
1 1 ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှ...
M.A 1st Semester
1 1 ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓရဟန်းေ...
B.A ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုရေးကဏ္ဍ သို့မဟုတ် အဖွဲ့တစ်ခု သီးသန့် ဖွဲ့စည်း ပေးထားပါရန်။ မိမိ တတ်ကျွမ်းသော ဘာသာအလိုက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင့် မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုခြင်း စသည် သာသနာပြလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည်။ ၀ါဒအသီးသီး၊ ဂိုဏ်းအသီးသီးတို့ သိရှိနားလည်သဘောပေါက်စေနိုင်ရန် အတွက် ၀ိနည်း၊ သုတ္တန်၊ အဘိဓမ္မာ တို့ကို အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာ ကျမ်းပေါင်းစုံ ရှုထောင့်တို့ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြပေးစေလိုပါသည်။ ဖိုရမ် ChatRoom မှာ မန်ဘာမလုပ်ဘဲ ဆွေးနွေးချင်သူများတွက် sky.moon@im.partych.at ကို အင်ဗိုက်လုပ်၍ gtalk ကနေ ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ SITAGU EDUCATION NETWORK Sitagu International Buddhist Academy သီတဂူဓမ္မ၀ိဟာရ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်
15 15 မဟာယာန၀ိနည်းနှင်...
B.A 1st semester ကျာင်းသားများအနေဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ အတန်းနှင့်ပတ်သက်သော သင်္ခန်းစာများ၊ မေးခွန်းများနှင့် မှတ်စုများကို 1BB မှာ သာရေးစေချင်ပါသည်။
22စူဠကမ္မ၀ိဘင်္ဂသုတ်...
2nd semester ကျာင်းသားများအနေဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ အတန်းနှင့်ပတ်သက်သော သင်္ခန်းစာများ၊ မေးခွန်းများနှင့် မှတ်စုများကို 2BB မှာ သာရေးစေချင်ပါသည်။
44သိမ်အကြောင်း
Fri Sep 12, 2014 5:08 am
3rd semester ကျာင်းသားများအနေဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ အတန်းနှင့်ပတ်သက်သော သင်္ခန်းစာများ၊ မေးခွန်းများနှင့် မှတ်စုများကို 3BB မှာ သာရေးစေချင်ပါသည်။
33Ontology (Realit...
1 1 VINAYA PITAKA OR...
Fri Sep 12, 2014 5:09 am
1 1 မြန်မာနိုင်ငံသို...
1 1 မဟာယာန၀ိနည်းနှင်...
Diploma(3 rd semester)
Diploma ကျောင်းသားများ မိမိတို့ Level အလိုက် Post များတင်လိုပါက ဤ ကဏ္ဍတွင် ရေးသားတင်ပို့နိုင်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲများအတွက် မှတ်စုမှတ်ရာများနှင့် အကြံပေးချက်များ၊ စာအုပ်စာတမ်းများကို General တွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် မိမိတို့၏ Profile များတွင် ရေးတင်ထားနိုင်ပါသည်။(Profile တင် မိမိကန့်သတ်လိုပါက ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါသည်။)
22ABHIDHAMMA
Sun Aug 11, 2013 12:41 pm
1 1 ဗုဒ္ဓစာပေကို လေ့လ...
Diploma ကျောင်းသားများ မိမိတို့ Level အလိုက် Post များတင်လိုပါက ဤ ကဏ္ဍတွင် ရေးသားတင်ပို့နိုင်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲများအတွက် မှတ်စုမှတ်ရာများနှင့် အကြံပေးချက်များ၊ စာအုပ်စာတမ်းများကို General တွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် မိမိတို့၏ Profile များတွင် ရေးတင်ထားနိုင်ပါသည်။
44Gov't to deploy ...
The newest registered user is sitagustudent
Most users ever online was 13 on Thu Jun 21, 2012 12:17 pm